Full Report - မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွင့်အခါကောင်း။ တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးမ…
Full Report - မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွင့်အခါကောင်း။ တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ
(၁၉၉ဝ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ by Nay Thiha 958 views
Kyaw Linn Khaing
Phyo ThuRa Maung , Corporate Lawyer at Self Employed
1. Report title DATE Month Year မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွင့်အခါကောင်း။ တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ
2. ကျမ်းဦးစကား McKinsey & Company၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးသုတေသန လက်ရုံးဖြစ် သော မက်ကင်ဆီ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း(The McKinseyGlobal Institute - MGI)ကို ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်စေရေးအတွက် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ပြည်သူလူထုနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍမှခေါင်းဆောင်များအားစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အခြေပြုနိုင်သော အကြောင်းခြင်းရာများနှင့် ထိုးဖောက်သိမြင်နိုင်စွမ်းများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ MGI သုတေသနသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ခေါင်းဆောင်များ၏ ထိုးဖောက်သိမြင် နိုင်စွမ်းများနှင့်အတူ စီးပွားရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းများကို အသုံးပြုရင်း စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲ ရေးစည်းကမ်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိပ်မှသည် တစ်ခုလုံးခြုံသည် နည်းပညာသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မဟာဗျူဟာနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒကို သက် ရောက်စေသော ကျယ်ပြန့်လှသည့် မက်ခရိုဘောဂဗေဒ အင်အားစုများကို ပို၍နားလည် သဘောပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်လေ့လာ စစ်ဆေးထားသည်။ MGI၏ နက်ရှိုင်းသောအစီရင်ခံစာများတွင် နိုင်ငံပေါင်း၂၀-ကျော်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကြီး ၃၀-ကျော်တို့ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော သုတေသနတွင် ဦးတည်ချက်လေးခုပါဝင်သည်။ ယင်းတို့မှာ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဈေးကွက်များ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာမှု၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့၏ စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုနှင့် မြို့ပြအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲမှုတို့ပင်ဖြစ်သည်။ မကြာမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသနတွင် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေး၊ အခြေခံအဆောက်အဦကုန်ထုတ် စွမ်းအား၊ အနာဂတ်မြို့တော်ကြီးများနှင့် အင်တာနက် သက်ရောက်မှုတို့ကို ဖော်ပြထားသည်။ MGI ကို McKinsey & Company ၏ ဒါရိုက်တာများဖြစ်ကြသော Richard Dobbs နှင့် James Manyika တို့က ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ Micheal Chui ၊ Susan Lund ၊ Jaana Remes နှင့် Yougang Chan တို့က အကြီးအကဲများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့များကို ထိပ်တန်းပညာရှင်အဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး ကမ္ဘာအ၀ှမ်းရှိ မက်ကင်ဆေး ရုံးများမှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် လုပ်ဖော်ကိုက်ဘက်များ၊ စက်မှုနှင့် စီမံ ခန့်ခွဲရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏ မက်ကင်ဆေး ဂလိုဘယ်နက်တ်ဝပ်စ်ကို ချဉ်းကပ်အသုံးပြုပါသည်။ ထို့ပြင် နိုဘယ်ဆုရှင်များ ပါဝင်သော ဦးဆောင်စီးပွားရေးပညာရှင်များက သုတေသန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။ McKinsey & Company လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များက MGI သုတေသနလုပ်ငန်းကို ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့သည်။ ထိုသုတေသနအား မည်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မည်သည့်အစိုးရ သို့မဟုတ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမျှ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ MGI အကြောင်း ထပ်မံသိရှိလိုပြီး အစီရင်ခံစာများ ကြည့်ရှုလိုပါက www.mckinsey.com/mgi သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ Copyright © McKinsey & Company 2013
3. အာဆီယံရှိ Mc Kinsey & Company Mc Kinsey & Company သည် ကမ္ဘာ့အနှံ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတွင်ဦးဆောင်နေကြသည့် များစွာသော အဖွဲ့အစည်းများက မိမိတို့၏ စိန်ခေါ်မှု များကို ဖြေရှင်းရာတွင် ၄င်းကအထောက်အကူပေးပါသည်။ ၄င်းကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၅၀) ကျော်တွင် အတိုင်ပင်ခံများကို ထားရှိကာ နိုင်ငံ (၈၅) နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံးသော ကော်ပို ရေးရှင်းကြီးများ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများအနက် အခု (၁၀၀) လျှင် (၉၅) ခုတို့ကို လည်းကောင်း၊ မဟာဗျူဟာကျသောကိစ္စရပ်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုရေးကဏ္ဍရှိ ဦးဆောင်သည့် ဌာနများကိုလည်းကောင်း အကြံပေးပါသည်။ ဆယ်စုနှစ် (၈) ခုကျော်သည့်တိုင်အောင် ဤလုပ်ငန်းဌာန၏ ပင်မ မူလရည်မှန်းချက်မှာ၊ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများက ရင်ဆိုင်နေရသော သေရေးရှင်ရေးအမျှ ဖြစ်သည့် ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့အစည်း၏ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော ပြင်ပ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အလုပ်အကျွေးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်မူထူးခြားသည့်စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေးအရမတူ ကွဲပြားမှုရှိသည့်ဒေသ တစ်ခုတွင် တည်ရှိသည့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ McKinsey & Company သည် ၄င်း “လုပ်ငန်းကြီး” (the Firm)၏ အမြန်ဆန်ဆုံးကြီးထွားလာနေသည့် ရုံးလုပ်ငန်းအသိုက်အမြုံတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် Mc Kinsey က အာဆီယံတွင် ၄င်း၏ပထမဆုံးသော ရုံးကို ဂျကာတာတွင်ထူထောင်ပြီးနောက် မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် ၄င်း၏ရုံးများကို ဖွင့်ခဲ့ပြီးမကြာမီကလေးတွင်ကမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်တွင် ၄င်းရုံးကိုဖွင့်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတွင် ကမ္ဘာနှင့်ဒေသတွင်းမှ အသက်မွေးပညာရှင်(၃၀၀)ကျော်မျှရှိပြီး၊ ၄င်းဒေသတွင်းရှိ အများပြည်သူလူထု၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့်လူမှုရေးကဏ္ဍများမှ ဖောက်သည်များ၏ အရေးကြီးဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းပေး၍ အလုပ်အကျွေးပြုလျက်ရှိပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှအနေဖြင့်အရေးကြီးကြီးပေါင်းစည်းသည့် ဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ် ကြီးထွားလာနေသည်အလျောက်ထိုသို့ အလုပ် အကျွေးပြုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှရှိ Mc Kinsey & Company ကို၎င်း လုပ်ငန်းမှ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ Oliver Tonby က ဦးဆောင်ပါသည်။
4. Report title ၂D၀A၁TE၃ -Mခုနonှစt်၊h ဇ Yွနe်လar မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချိန်ကောင်း။ တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိကစိန်ခေါ်မှုများ
5. ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်နှင့် ၇ ရက်ကြားတွင် အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးဖိုရမ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်သစ်ဖြစ်သော နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အစိုးရနှင့်တက္ကသိုလ်များမှ သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားသူများ၏ အဆင့်မြင့် နိုင်ငံတကာတွေ့ဆုံပွဲကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအလားအလာများကို ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်း ခိုင်မာသည့် လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည် အတန်အသင့် သေးငယ်ပြီး အာရှ တစ်ရပ်လုံး စီးပွားရေး၏(၀.၂%)ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး အလားအလာသည် ထူးခြားရှားပါးမှုများပြားသည့် သဘောသက်ရောက်နေတတ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အလွန်ပင် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲလှသော အခြေအနေမျိုးနှင့် ကြုံကြိုက်နေသည်။ ခမ်းနားသော သမိုင်းကြောင်းရှိသည့် ကျယ်ဝန်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးသော ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၏ဗဟိုချက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသော လယ်ယာစီးပွားရေးနိုင်ငံအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထုတ်ယူအသုံးပြုခြင်း မခံရသေးသော နောက်ဆုံး ဈေးကွက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မက်ကင်ဆီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း(MGI)က မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစီမံကိန်းတစ်ရပ်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို သုတေသန အကြောင်းကို အနည်းငယ်မျှသာသိရှိကြပြီး အချက်အလက်များသည်လည်း ယေဘုယျ အားဖြင့် နည်းပါးသည့်ပြင် ̶ တိကျမှုလည်း မရှိကြပေ။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းစစ်မှုအတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှသော အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်၍ ခိုင်မာသော အချက်အလက် အခြေခံတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ နယ်မြေခံသုတေသီများ၏ အကူအညီဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအမျိုးမျိုးမှ အချက်အလက်များကို စုဆောင်း ခဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အပါအ၀င် လူပေါင်း ၂၀၀- ကျော်အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF)၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(UNDP)နှင့် စီးပွားရေးပညာဌာန (EIU) အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်များ၏ အားကိုးအားထား မပြုလောက်မှုသည် မငြင်းနိုင်သော ပြဿနာရပ်ဖြစ်နေသည့်တိုင် အလားအလာကို ယခုကဲ့သို့ ပထမဆုံး အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာကို ပိုမို နားလည်သဘောပေါက်လိုသူများအတွက် တာထွက်ရာ နေရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် စီးပွားရေး တုံ့နှေးနေခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးခြေလှမ်းသစ်ကို ဆွေးနွေးထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေး အလားအလာများကိုလည်း လေ့လာထားပါသည်။ ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကကဏ္ဍများ၏ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း အလားအလာပမာဏနှင့် GDP သို့ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှု နှစ်ရပ်လုံးအတွက် ခန့်မှန်းရန်ကဏ္ဍ အလိုက်အောက်ခြေမှ အထက်သို့ ဆန်းစစ်မှု၏ MGI အတွေ့အကြုံကို အသုံးပြုထားသည်။ စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်လျှောက် ကုန်ထုတ်လုပ်အား မြှင့်တင်မှု၏ အရေးကြီးပုံကိုလည်း အလေး ပေးထားသည်။ ငြင်းချက်မရှိအောင် အထူးအလေးပေးရန် လိုအပ်သော နိဒါန်း
6. မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချိန်ကောင်း - တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ ကဏ္ဍလေးခုကိုလည်း လေ့လာထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသည် ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်စတင်လျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံအား ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ခုန်ကျော်ရောက်ရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းကိုပေးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုဦးတည်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပြောင်းလဲရေး၏ အရေးကြီးပုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ပြအသွင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီး ယင်းအတွက် အလျင်အမြန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် လူအချင်းချင်းတို့မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသို့ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရေးတို့ကို အလေးပေးဆွေးနွေးထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်သည် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ထောင့်ပေါင်းစုံသမိုင်းတွင်မည့် အထိမ်းအမှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဤအစီ ရင်ခံစာကို အစိုးရနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် သက်ရောက်မှု အချို့ကို ဆွေးနွေးထားခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ထားပါသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ မက်ကင်ဆီ ဒါရိုက်တာ Heang Chhor နှင့် ဆိုးလ်မြို့တော်ရှိ မက်ကင်ဆီနှင့် MGI ဒါရိုက်တာ Richard Dobbs တို့က ဂျီနီဗာရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Doan Nguyen Hansen နှင့် လန်ဒန်ရှိ MGI ထိပ်တန်းပညာရှင် Fraser Thompson တို့နှင့်အတူ ဤသုတေသနကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် Nancy Shah က စီမံကိန်းအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ပြီး အဖွဲ့တွင် Kantala Karkum ၊ Stephanie Knight ၊ Meik Laufer ၊ Lukas Streiff နှင့် Christabel Su-Huey Sunmugam တို့က MIG သုတေသနပညာရှင် Tim McEvoy ၏ အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ Jonathan Ablett ၊ Suvradipta Banerjee ၊ Timothy Beacom ၊ Shannon Bouton ၊ Marco Breu ၊ Martin Checinski ၊ Nicola Chiara ၊ Musta Chironga ၊ Brian Cooperman ၊ Dumitru Dediu ၊ Lucia Fiorito ၊ Michael Fleming ၊ Francois Godin ၊ Shishir Gupta ၊ Supriya Handa ၊ Johan Hesselse ၊ Eduardo Doryan Jara ၊ Martin Joerss ၊ Karen Jones ၊ Priyanka Kamra ၊ Anushia Kandasamy ၊ Duncan Kauffman ၊ Tomas Koch ၊ Kinshuk Kocher ၊ Elif Kutsal ၊ Peter Lambert ၊ Cecile Lavrard ၊ Armin Lohr ၊ Susan Lund ၊ Anu Madgavkar ၊ Laurie Mahon ၊ Alan Martin ၊ Tobias Meyer ၊ Jan Mischke ၊ Ellen Mo ၊ Sabrina Mustopo ၊ Derek Neilson ၊ Bettina Neuhaus ၊ Stagg Newman ၊ Vivek Pandit ၊ Moira Pierce ၊ Herbert Pohl ၊ Ali Potia၊ Tamara Rajah ၊ Sree Ramaswamy ၊ Lou Rassey ၊ Markus Rebman ၊ Stefan Rehbach ၊ Jaana Remes ၊ Sunali Rohra ၊ Morten Rossé ၊ Lorraine Salazar ၊ Brain Salsberg ၊ Sunil Sanghvi ၊ Shirish Sankhe ၊ Halldor Sigurdsson ၊ Vivien Singer ၊ Pornnipa Srivipapattana ၊ Matt Stone ၊ Jannifer Sternberg ၊ Tilman Tacke ၊ Nadia Terfous ၊ Asli Ucyigit ၊ Danny Van Dooren ၊ Sergio Sandoval Villalba ၊ Jue Wang ၊ Jonathan Woetzel နှင့် Haimeng Zhang အပါအ၀င် အကြံဥာဏ်များနှင့် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြသော မက်ကင်ဆီ အဖွဲ့သားအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့အနေဖြင့် တည်းဖြတ်မှု အကူအညီများ ပေးခဲ့ကြသော MGI အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ Janet Bush နှင့် Roger Malone ၊ ပြင်ပဆက်ဆံရေး အကူအညီများ ပေးခဲ့ကြသော Penny
7. Burtt နှင့် Rebeca Robboy တို့အပြင် MGI ၏ တည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်ရေး မန်နေဂျာ Julie Philpot နှင့် ရုပ်ပုံဂရပ်ဖစ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Marisar Cardar တို့ ထံမှလည်း အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဤစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များ ပေးခဲ့ကြသော ဘရွတ်ကင်းစ် တက္ကသိုလ် Martin Baily၊ ဘရွတ်ကင်းစ်တက္ကသိုလ် စီးပွားရေးပေါ်လစီဌာနမှ ဥက္ကဋ္ဌ Bernard L.Schwartz၊ Richard Coopen၊ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပညာဌာန ပါမောက္ခ Maurits C.Boas ၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သီးခြားလွတ်လပ်စွာလေ့လာသူ Richard Horsey၊ နိုဘယ်ဆုရှင် A.Micheal Spence ၊ Leonard N.Stern စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကျောင်း၊ စီးပွားရေးပညာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပါမောက္ခနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ William R.Berkley တို့အပြင် ဆစ်ဒနီမြို့ မက်ကွာရီတက္ကသိုလ်၊ စီးပွားရေးပညာ ပါမောက္ခ Sean Turnell တို့အား အလွန့်အလွန် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာ့တ၀ှမ်းမှပညာရေး၊ အစိုးရနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များရှိ ကျွမ်းကျင်သူများကလည်း တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော လမ်းညွှန်မှုနှင့်အကြံဥာဏ်များကို ပံ့ပိုးပေး ခဲ့ကြပါသည်။ အိုးဝေကုမ္ပဏီလီမိတက်ပိုင်ရှင်နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးနေအောင်၊အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးစက်အောင်၊ ရန်ကုန်မြို့တော် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းရုံး ဌာနကြီးမှူး ဦးတိုးအောင်။ UNDP အစီအစဉ် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Elinor Bajrakthari ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU မစ်ရှင်၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ဌာနခွဲ ကြီးမှူး Antonio Berenguer ။ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအကြီးအကဲ၊ Sharad Bhandari ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်နှင့်အဖွဲ့ ဒုတိယအကြီးအကဲ Oliver Bientzle ။ Vriens & Partners ၊ မြန်မာနိုင်ငံရုံး မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Romin Caillaud ။ လွတ်လပ်သော ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ Aela Callan။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန (MIMU) မန်နေဂျာ Shon Campbell ။ Jebsen & Jessen အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Alex Chan။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆွေးနွေးမှု HD စင်တာ၊ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေကိုယ်စားလှယ် Adam Cooper ။ ဟားဗာ့ဒ်ကနေဒီကျောင်း၊ ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Ash Center ပါမောက္ခ ၊ David Dapice ။ IMF မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမစ်ရှင်အကြီးအကဲ Matt Davies ။ Proximity Designs ဒါရိုက်တာဒေါ်ဒက်ဘီအောင်ဒင်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှသံရုံး၊ ရန်ကုန်၊ စီးပွားရေး၊ ဆက်ဆံရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအကြီးအကဲ Fergus Eckersley ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ဓနသဟာယရုံး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး အကြီးအကဲ Jeff Glekin ။ နိုင်ငံတကာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ (IMG)၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Andy Hall ။ JJ-Pun Limitted အထွေထွေမန်နေဂျာ Phillip Hoffmann ။ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသန (MDR) သုတေသီ အန်းမိုဟုန် ။ လွယ်ဟိန်းအုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းစံထွန်း ။ Jebsen & Jessen ဥက္ကဋ္ဌ Heinrich Jessen ၊ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မြန်မာနိုင်ငံတိုးချဲ့လုပ်ငန်း ဥက္ကဋ္ဌ Putu Kamayana ။ My Republic ၊ Jong-Inn Kim နှင့် အဖွဲ့သားများ။ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ စွမ်းအင်ကျွမ်းကျင်သူ အကြီးအကဲ Jong-Inn Kim ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ လုံခြုံရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (LIFT)၊ ရန်ပုံငွေဒါရိုက်တာ Ardew Kirkwood။ M.Invest စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင် Morten Kvammen။ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြတ်ကျော်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့(UMFCCI)၊ ဦးမောင်မောင်လေး။ ကမ္ဘောဇဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်၊ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO)၊ ဆက်ဆံရေးအရာရှိ Steve Marshall ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျသံအမတ်ကြီး Bronte Moules ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ နိုင်ငံဆိုင်ရာမန်နေဂျာ Nikolas Myint ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ စီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ ဦးမြင့် ။ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီ (NESAC)အဖွဲ့ဝင်နှင့် ရန်ကုန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်မြင့်ဦး။ UMFCCI တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) အဖွဲ့ဝင်၊
8. မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချိန်ကောင်း - တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်။ နိုင်ငံတကာအင်တာပရိုက်စ်၊ စင်္ကာပူ၊ ရန်ကုန်စင်တာဒါရိုက်တာ Cheong Yew Ng။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်လှိုင်မော်ဦး။ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးအောင်နိုင်ဦး။ NESAC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ထွတ်ဦး။ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်ဌာန၊ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးဇော်ဦး။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ နိုင်ငံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ Isabell Poppelbaum ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံး၊ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး Anthony Preston ။ Serge Pun & Associates (Myanmar) Limitted ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးဆာဂေးဖန်း။ မြန်မာ့ထွက်ရပ်လမ်း၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ ဒေါ်ခင်မိုးဆန်း။ ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းေ ရးမှူးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင် ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ကော်မရှင် အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူး ဦးဝေလင်းစော။ Jebsen & Jessen အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ Graf von der Schalenberg ။ နိုင်ငံတကာငွေကြေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၊ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Charles Schneider ။ Tata Internal နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Sunil Seth ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ Kanthan Shankar ။ UMFCCI ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် မြန်မာ့ထွက်ရပ်လမ်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးလှမောင်ရွှေ။ UN-HABITAT အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ Michael Slingsby ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သံရုံး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဌာနအကြီးအမှူး Doug Sonnek ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း။ UMFCCI ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သိန်း။ NESAC အဖွဲ့ဝင်နှင့် မြန်မာ့ထွက်ရပ်လမ်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်သန်း။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး၏လက်ထောက်၊ ဦးဝေယံမိုးသိန်းသန်း။ Thiha Group အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးအေးသီဟ။ MDR အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ ဒေါ်မြသီသစ္စာ။ MDR တွဲဘက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ ဒေါ်မြတ်သက်သစ္စာ။ M-Invest စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင် Matthew Tippets ။ West Indochina တည်ထောင်သူနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး Luc de Waegh ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒါရိုက်တာ Lisa Weedon ။ MIMU အချက်အလက်အရာရှိ၊ ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနအကြီးအကဲ Paul Wittingham တို့အားလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုနှစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လေ့လာရေးကို CIMB ASEAN Research Institute မှ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အသွင်ပြောင်း လဲစေသည့် အားအင်များကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် မဟာဗျူဟာကျသော တည်နေရာ များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စေရန်နှင့် နောက်လာမည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုလှိုင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားနိုင်စေရန်ဟူသော MGI၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ MGI၏ သုတေသနအားလုံးကဲ့သို့ပင် ဤသုတေသနသည်အမှီအခိုကင်းပြီး မည်သည့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်း၊ မည်သည့်အစိုးရ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမျှ တာဝန်ပေးစေခိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကမကထပြုခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ကို ကျွန်ုပ်တို့ အလေးအနက် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ Richard Robbs ဒါရိုက်တာ၊ မက်ကင်ဆီ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ဆိုးလ်မြို့။ James Manyika ဒါရိုက်တာ၊ မက်ကင်ဆီ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ဆန်ဖရန်ဆစ္စကိုမြို့။ ၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ မေလ။
9. စိန်ခေါ်မှု နှင့် ... ဒေါ်လာ-၁၅၀၀ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ကြီးများတွင် ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်၌ ထပ်မံနေထိုင် မည့် လူဦးရေ ၁၀ - သန်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပျမ်းမျှကျောင်းတက်မှု (ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၊ လူသားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၃-ခုနှစ်) ၄ - နှစ် ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု အလားအလာကို အထောက်အကူပြုရန် စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။ အခြေခံ အဆောက်အဦ ကဏ္ဍ၏ တစ်ခုတည်း တွင်ပင် ဒေါ်လာ ၃၂၀-ဘီလီယံ လိုအပ်မည်။ ဒေါ်လာ ၆၅၀ ဘီလီယံ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားတစ်ဦး၏ ပျမ်းမျှကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည် အာရှနိုင်ငံများ၏ စံနှုန်းအောက် (၇၀%) လျော့နည်းသည်။
10. ... အ ခွင့် အ လမ်း အောင်မြင်မည့် အလားအလာ ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ် GDP သည် ယနေ့ကာလထက် ၄-ဆ မြင့်တက်မည် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀၀ + ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်သော နောက်ထပ်အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးနိုင်မည့် အလားအလာ ၁၀ သန်း စားသုံးနိုင်သော လူတန်းစားသည် ၂၀၁၀-ပြည့်နှစ်တွင် ၂.၅ သန်းရှိရာမှ ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်တွင် သုံးစွဲမှုအလားအလာသည် ၃-ဆ တိုးကာ ၁၉ သန်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေသော နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့၏ အနီးစပ်ဆုံး ဒေသများတွင် နေထိုင်သူလူဦးရေ။ ကြီးမားသောဈေးကွက်အလားအလာ။ သန်း ၅၀၀ သုံးစွဲမှုသည် ၃ ၅ ဘီလီယံရှိရာမှ ၁၀၀ ဘီလီယံအထိ သုံးဆတိုးလာနိုင်ပြီး
11. မာတိကာ အနှစ်ချုပ် 1 ၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခြေလှမ်းသစ် 18 ၂။ ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂၀၀ အခွင့်အလမ်းရှိသော်လည်း စိတ်ပျက်ဖွယ် အလားအလာ 40 ၃။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလားအလာများကို ဖွင့်ထုတ်နိုင်သော အဓိကသော့ချက် ၄-ခု 65 ၄။ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတို့အတွက် ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ 136 နောက်ဆက်တွဲ ။ ။နည်းပညာဆိုင်ရာ မှတ်ချက်များ 146 ကျမ်းကိုးစာရင်း 164 ၁ ၁၆ ၃၈ ၆၃ ၁၃၆ ၁၄၆ ၁၆၅
12. မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချိန်ကောင်း - တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ
13. မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချိန်ကောင်း - တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ 1 အာဏာရစစ်အစိုးရသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဘားမားဟူသော အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းမှ မြန်မာနိုင်ငံဟူသော အသုံးအနှုန်းသို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထိုအမည်ကို လက်ရှိအချိန်အထိ တရားဝင်သုံးစွဲလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများက ထိုသို့ အမည်ပြောင်းလဲခြင်းကို အသိအမှတ်မပြုသော်လည်း အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဟူသော အမည်ကိုသာ ရွေးချယ် သုံးနှုန်းထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အချက်အချာကျစွာ အရေးကြီးသည့်အခိုက်အတန့်သို့ ရောက်ရှိ နေလေပြီ။ 1ဆယ်စုနှစ်များကြာသည်အထိ အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးနောက် အစိုးရက နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခဲ့သည်။ ပေါ်ပေါက်ဆဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ပဋိပက္ခများနှင့် ရပ်ရွာအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်း ပြန်လည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြီဖြစ်သည်။ ထိုပြင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် သီးခြားကင်းကွာခဲ့ရပြီးနောက် ပွင့်လင်းသော ဈေးကွက်စီးပွားရေး အခြေခံအုတ်မြစ်များကိုလည်း ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဆောင်ရွက်ရန်အရာရာသည် ရှိနေသော်လည်း စိတ်ပျက်ဖွယ်လည်း ရှိနေနိုင်သည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း၏ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပွင့်လင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထောက်ခံရန် ထက်သန်နေသော နိုင်ငံတကာအသိုက်အ၀န်းတစ်ခုထံမှ စိတ်ဆန္ဒကောင်းများ ရရှိခံစားနေပေသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကလည်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိဘဲ ပေါ်ပေါက်လာနိုင် သော ခိုင်မာသည့်ဈေးကွက်အလားအလာကို သဘောပေါက်စွာ စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ကြီးထွားလာသောဒေသ၏ ဗဟိုချက်တွင်တည်ရှိနေပြီး ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် စတင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါးမျှ စီးပွားရေး ရပ်တန့်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု အလွန်အမင်းနိမ့်ကျမှုကြောင့် အခြေခံစိန်ခေါ်မှုများ ကြုံတွေ့လာရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP မှာ အာရှ GDP၏ (၀.၂) ရာနှုန်းမျှ ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုစိန်ခေါ်မှုများက မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အလယ်အလတ်အဆင့်များကို ခုန်ကျော်သွားရင်း မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ကို ပေးသည့်အပြင် ပြည်သူများ၏ မြင့်မားသော မျှော်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လုံလောက်သော အလုပ်အကိုင်များကိုလည်း ဖန်တီးလာနိုင်စေပေသည်။ များစွာသော မသေချာမရေရာမှုများလည်း ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များက မြန်မာနိုင်ငံကို တက်တက်ကြွကြွစဉ်းစားလျက်ရှိကြသော်လည်း အများအပြားကမူ အစိုးရက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနှင့် လူမျိုးစုအချင်းချင်း အကြမ်းဖက်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးပြန်လည်ပြုပြင်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးဆီသို့ ဦးတည်သောလက်ရှိ အရှိန်ကိုထိန်းသိမ်းကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ကန့်သတ်မှုများကို ဖြေလျှော့အာမခံချက် ပေးစေလိုကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောနိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးရွေးချယ်မှုများက ပြောင်းလဲမှု အဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် ထောက်ခံအားပေးသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှု အဆင့်ကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ဤသို့ဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးအသွင်ပြောင်းမှုကို အောင်မြင်စေပါမည်။ ကဏ္ဍမျိုးစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း၏ စီးပွားရေး ပမာဏကို ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်တွင် လေးဆကျော်တိုးကာ ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀၀ကျော်အထိ ရရှိနိုင်သော အလားအလာရှိသည်။ သို့ရာတွင် ထက်မြက်သော စီးပွားရေးစီမံကိန်းတစ်ရပ် ရေးဆွဲကာ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့လျှင်မူ မျက်မှောက်ကာလ၏ နာမည် ကောင်းရရှိမှုနှင့် သတိနှင့်ယှဉ်သော အကောင်းမြင်နေမှုတို့သည်လည်း လျင်မြန်စွာပျောက် ကွယ်သွားပေလိမ့်မည်။ အနှစ်ချုပ် ၁
14.2ဤအစီရင်ခံစာတွင်မက်ကင်ဆီနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေး သုတေသနလက်ရုံးဖြစ်သော မက်ကင်ဆီဂလိုဘယ်အင်စတီကျူ(MGI)က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခေတ်သစ်အတွင်းသို့ ခုန်ပျံဝင်ရောက်ရေးအတွက် ယနေ့ကာလ၏အခွင့်အလမ်းပြတင်းပေါက်ကို အရင်ဆုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် မည်သို့ကမ်းလှမ်းရှာဖွေမည် ဟူသော စီးပွားရေးအလားအလာကို ဆန်းစစ်ထားသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကနဦးအဆင့်တွင် ရှိနေသည့်တိုင် မငြင်းနိုင်သော အခွင့်အလမ်းကောင်းအချို့ ရှိနေသည်။” မြန်မာနိုင်ငံသည် အလွန်ကြီးမားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် အာရှတလျှောက် ပြန့်ပွားနေသော ဆင်းရဲမွဲတေမှုတို့နှင့် အကြီးအကျယ် လွဲချော်ခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရပ်တည် နေသည့် ကာလပတ်လုံး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုလမ်းကြောင်းကို တည်ဆောက်နိုင်သော ပင်ကိုယ် သဘာဝအရင်းအမြစ် အမြောက်အမြားနှင့် မြင့်မားစွာ ထောက်ခံသော ပြင်ပ၀န်းကျင်တစ်ရပ် ရှိနေသည်။ “နှစ်ပေါင်းများစွာ စီးပွားရေးရပ်တန့်နေပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသည်အာရှတွင် နောက်ကျကျန်ခဲ့သည်။” ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အကြား ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသည် တစ်နှစ်လျှင် GDP ဖွံ့ဖြိုးမှု (၃%) ရရှိလာကာ ရှေ့သို့ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ တဟုန်ထိုးကျဆင်းလာကာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် (၁.၆%) သာ ရှိသည်။ အဆိုပါကာလအတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP သည် လေးဆမြင့်တက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP မှာ စင်စစ်အားဖြင့် ရပ်တန့်နေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် ၁၉၉၀-ပြည့်နှစ်ကတည်းက မြင့်တက်လာခဲ့သော်လည်း အာရှတလျှောက်၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းထက် များစွာနည်းပါးနေသေးသည်။ ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP သည် တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ (၄.၇%) တိုးတက်သည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ ထိုနှုန်းသည် ယင်း၏ အာရှအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှတိုးတက်မှု (၆%)ခန့်ထက် လျော့နည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ အာရှတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP တိုးတက်မှု ပျမ်းမျှ (၄.၂%) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP တိုးတက်မှုသည် (၂.၇%) သာရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP နည်းပါးနေခြင်းသည် အာရှ၏ ထင်ရှားသော ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံက လွဲချော်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် မြန်မာလုပ်သားတစ်ဦး၏ တစ်နှစ်ပတ်လည် အလုပ်သည်စီးပွားရေး တန်ဖိုးကို ဒေါ်လာ ၁,၅၀၀ ခန့်သာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး အခြားသော အာရှ (၈)နိုင်ငံ၏ ပျမ်းမျှထက် (၈၀%) လျော့နည်းနေပေသည်။ (ပြကွက် E-1)
15. မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချိန်ကောင်း - တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုမျာ3းလွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀-ကျော်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP ဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိန် အသင့်အတင့်တိုးတက်ရခြင်းမှာ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်မှုထက် လူဦးရေတိုးတက်လာမှုက ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား လျော့နည်းမှုက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP နိမ့်ကျမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ကွာဟမှုသည် ကဏ္ဍအားလုံးတစ်လျောက်တွင် ဖြစ်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် နိုင်ငံအများစုတွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနိမ့်ကျသောကဏ္ဍဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍပေါ်တွင် အားပြုမှီခို နေရခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် GDP ၌ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဝေစုသည် ၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် (၃၅ရာခိုင်နှုန်း)ရှိရာမှ ၂၀၁၀-ပြည့်နှစ်တွင် (၄၄ရာခိုင်နှုန်း)အထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်တွင် အခြားအာရှနိုင်ငံများသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သဖြင့် ယင်းတို့၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဝေစု ထိုးကျလာခဲ့သည်။ အာရှတွင် ကျန်သောနိုင်ငံများတွင် GDP၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ပျမ်းမျှဝေစုမှာ ၂၀၁၀-ပြည့်နှစ်တွင် (၁၂ရာခိုင်နှုန်း)သာ ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်သော အစိတ်အပိုင်းများတွင် စိတ်တိုင်းကျ ဆုံးဖြတ်ဝယ်ယူနိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအပြင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှုများတွင် ငွေကြေးသုံးဖြုန်းနိုင်ရန် တစ်နေ့ဝင်ငွေ (၁၀)ဒေါ်လာကျော် (PPP) ရရှိကြသည့် စားသုံးသူ လူတန်းစားများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည်ကား ယင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးသည့် သမိုင်းကြောင်းရှည်ကြာမှုကြောင့် အလွန်ဆင်းရဲသည့် နိုင်ငံအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ (၃၅ရာခိုင်နှုန်း)သည် ကမ္ဘာ့စားသုံးနိုင်သော လူတန်းစားဝင်များဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ့လူဦးရေ၏ (၄ရာခိုင်နှုန်း)သာလျှင် ထိုလူတန်း စားတွင် ပါဝင်ပေသည်။ ကမ္ဘာ့စားသုံးနိုင်သော လူတန်းစား ၂.၅ ဘီလီယံတွင် (၄၀ရာခိုင်နှုန်း) သို့မဟုတ် ၁ ဘီလီယံ သည် အာရှတွင် နေထိုင်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးချင်းစီ ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးမခိုင်မာခြင်းသည် လုပ်သားကုန်ထုတ် စွမ်းအားနိမ့်ပါးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပြကွက် E1 လူတစ်ဦးချင်းစီ ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မှု ပြတ်ယွင်းခြင်း (အစစ်အမှန်)၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မှတ်ချက်။အချိုးကျ (စကေးကိုက)် မဟုတ်ပါ။အနီးစပ်ဆုံးယူထားသည့်အတွက်ပေါင်းလိုက်လျှင်ကိုက်ချင်မှကိုက်ပါမည်။ Ø 2.5 မြန်မာ 0.8 ဗီယက်နမ် 1.2 အိန္ဒ္ဒိယ 1.4 ဖိလစ်ပိုင် 2.0 သီရိလင်္ကာ ၂2.3 အင်ဒိုနီးရှား 3.0 တရုတ် 4.4 ထိုင်း 4.8 -69% Ø 47 +7% 1.5 -71% 2.2 3.6 5.5 6.8 6.5 7.8 8.4 Ø 5.3 တစ်ဦးချင်းစီ၏ ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ၂၀၁၀ ဒေါ်လာထောင်ပေါင်း အလုပ်အကိုင်/ လူဦးရေ % ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအား ၂၀၁၀ ဒေါ်လာထောင်ပေါင်း = × 50 55 40 36 33 45 57 57
16.4“သို့ရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မငြင်းပယ်နိုင်သော အားသာချက်များရှိသည်” အဓိကစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်ကြားမှပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပင်ကိုယ် စွမ်းအားများရှိသည်။ ယင်း၏ တည်နေရာသည်ကံဖေးမမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် စတင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည်လည်း အလားအလာကောင်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပင်ကိုယ်စွမ်းအားများမှာ ဓါတ်ငွေ့သိုက်ကြီး ရေနံနှင့် အဖိုးတန် သောနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖိုးတန်သော ကျောက်မျက်ရတနာများပါဝင်သော သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပဒေသာပင်ကြီးများပင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျောက်စိမ်း ထုတ်လုပ်မှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံက (၉၀ရာခိုင်နှုန်း) ပါဝင်သည့်ပြင် ပတ္တမြား၊ နီလာထုတ်လုပ်သော ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းနိုင်ငံများတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၅-နိုင်ငံမြောက် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးမြေ အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်သည့်ပြင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ရေသုံးစွဲမှုသည်လည်း တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ထက် ၁၀-ဆ များပြားသည်။ ထို့ပြင် ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေ စုစုပေါင်း သန်း (၆၀)ခန့်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သော အသက်အရွယ်ရှိ (၁၅ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်) လူဦးရေမှာ ၄၆-သန်းခန့်မျှ ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဦးရေသည် ၃-သန်း မှ ၅-သန်း ခန့်အထိရှိပြီး ၎င်းတို့သာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာပါက ၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံများက နိုင်ငံကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပေလိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တို့အကြား လမ်းဆုံများတွင် တည်ရှိနေခြင်းကလည်း အားသာချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါနိုင်ငံများသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ (၄၀ရာခိုင်နှုန်း)ရှိကာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ဈေးကွက်အလားအလာများလည်း ရှိသည်။ ခြုံ၍ဆိုရသော် မြန်မာနိုင်ငံသည် စားသုံးသူဦးရေ ဘီလီယံဝက်ကျော်၏ ဈေးကွက်ကြီးနှင့် နီးကပ်လျက်ရှိပေသည်။2 ထိုသို့သောအာရှ၏ စီးပွား ရေးများသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာနေရုံမျှမက ထိုဒေသအတွင်း စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုသည် အရှိန်ဖြင့်စုစည်းလျက်ရှိရာ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်နေပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၄-ခုနှစ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းကြီး (ASEAN) ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနှင့် အလှူရှင်များထံမှ ကြီးမားလာသော အထောက်အပံ့များ ရရှိနေပေသည်။ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားအစိုးရများကလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ သံရုံးများမထားဘဲနေခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သံရုံးများဖွင့်လှစ် လာကြသည်။ အလား အလာကောင်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖော်ညွှန်းသည့်အနေဖြင့် ယမန်နှစ် တစ်နှစ်တည်းတွင်ပင် ကုန်သွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမျှမကသေးဘဲ အမွေခံအခြေခံအဆောက်အဦး နည်းပါးသော မြန်မာနိုင်ငံ သည်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လက်လီလုပ်ငန်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် စိုက်ပျိုး ရေးကဏ္ဍများနှင့် တည်ဆောက်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဝေးလံခေါင်ပါး ကျေးလက်ဒေသများရှိ အဆင်းရဲဆုံး ရပ်ရွာများတွင် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနှင့် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကိုလည်း တန်းတူညီမျှ ရရှိခံစားစေနိုင်သော ဆက်သွယ်မှုများကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်သည်။2အိန္ဒိယပြည်၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းမှ ရရှိသော အိန္ဒိယပြည်နယ်များ၏ လူဦးရေမှလွဲ၍ ကိန်းဂဏန်း အားလုံးသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွက်ဖြစ်ပြီး ထိုကိန်းဂဏန်းများကို ကုလသမဂ္ဂနှင့် တရုတ်အမျိုးသားစာရင်းအင်း ဗျူရိုတို့မှ ရရှိသည်။
17. မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချိန်ကောင်း - တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ5မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်တွင် ၄-ဆ ဖွံ့ဖြိုးနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရဦးမည် လက်ရှိလူဦးရေပြောင်းရွှေ့မှုလမ်းကြောင်းများအတိုင်း ဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေပြီး ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်လည်း လွန်ခဲ့သောနှစ် (၂၀)က အတိုင်းပင် ရှိနေဦးမည်ဆိုပါက နှစ်စဉ် GDP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် (၃.၇%) ထက်ပင် နိမ့်ကျနေပေဦးမည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး၏ အဓိကကဏ္ဍ ၇-ခု၏ အလားအလာများကို ပြည့်ဝစွာ ထုတ်ယူအသုံးချနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုသည် နှစ်စဉ် (၈%)အထိ လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိလာပေလိမ့်မည်။ ၄င်းကဏ္ဍ (၇)ခုတို့မှာ စက်ရုံအလုပ်ရုံမှကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ စွမ်းအင်နှင့် သတ္တု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုတို့ ဖြစ်ကြပါ သည်။ ထိုကဏ္ဍ ၇-ခုအား ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးပမာဏသည် ၂၀၁၀-ပြည့်နှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၄၅ဘီလီယံ ရှိရာမှ ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်တွင် ဒေါ်လာဘီလီယံ (၂၀၀)ကျော်အထိ ၄-ဆမျှ တိုးတက်လာနိုင်သည့်အပြင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP သည်လည်း ၂၀၁၀-ပြည့်နှစ်တွင် ၀ယ်အားနှုန်းပြည့် (PPP) ဒေါ်လာ (၁၃၀၀)မှ သည် ၂၀၃၀- ပြည့်နှစ်တွင် ဒေါ်လာ (၅၁၀၀) အထိ ရောက်ရှိလာနိုင်ပေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ၂၀၃၀-ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်သူ ၁၈-သန်းခန့် ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်လာနိုင်ပေသည်။3 (တစ်ဦးချင်းစီ၏ ၀င်ငွေသည် တစ်နေ့လျှင် ၁.၂၅ ဒေါ်လာကျော် ရှိလာမည်။) အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ မကြာသေးမီ အတွေ့အကြုံများအရ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွင် ထိုသို့သော အရှိန်ရရှိရန် ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်နိုင်သော အလားအလာရှိသည်ဟု အကြံပြုကြသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ၀င်ငွေသည် သမိုင်းတွင်မကြုံဖူးအောင် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာလျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရ တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP ကို PPP ဒေါ်လာ (၁,၃၀၀)မှ (၂,၆၀၀)အထိ နှစ်ဆမြင့်တက်ရေးအတွက် ပျမ်းမျှကြာမြင့်ချိန် သည် ၁၉၆၀-ပြည့်နှစ်မတိုင်မီက ၄၇-နှစ် ရှိရာမှ ၂၀၀၀-ပြည့်နှစ်ကတည်းက ၁၇-နှစ် အထိ လျော့ကျလာခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် ယင်း၏ တစ်ဦးချင်း GDP (PPP) ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ မျက်မှောက်ကာလအဆင့်မှ ၄-ဆမြင့်တက်ရေး အတွက် ၁၄-နှစ်မျှသာ အချိန်ယူခဲ့ရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက ၁၃-နှစ်သာ အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံက ယင်း၏ တစ်ဦးချင်း GDP ကို ၁၂-နှစ်အတွင်း ၄-ဆ မြင့်တက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။4 အမှန်တကယ် နှစ်စဉ် GDP ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကို (၈%)အောင်မြင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်စဉ်ကုန်ထုတ် စွမ်းအားတိုးတက်မှုကို (၂.၇ရာခိုင်နှုန်း) မှသည် (၇ရာခိုင်နှုန်း)အထိ ရရှိအောင် အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန် လိုအပ်သည်။ (ပြကွက်E-2)။ ထို့ပြင် ထိုသို့သော အရှိန်သည် ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း မဖြစ်နိုင်ဟု ပြော၍မရကြောင်း အခြားအာရှစီးပွားရေး နိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများအရ သိရှိရသည်။ ဥပမာ - တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ် (၇ရာခိုင်နှုန်း)တိုးတက်ခဲ့ပြီ3းမြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်ကြား GDP (၈ရာခိုင်နှုန်း) တိုးတက်လာလျှင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP တိုးတက်မည့် ပမာဏအတိုင်း တရုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သီရိလင်္ကာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်း ယင်းတို့ တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP မြှင့်တင်ပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပျမ်းမျှလျော့ချရန်နှုန်းကို မူတည်ကာ တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP (PPP) အတွက် IFM တစ်ဦးချင်းစီ၏ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၁.၂၅ ဒေါ်လာ အောက်ရရှိလျှင် ဆင်းရဲမှုဟု ဖွင့်ဆိုသည်။ အချက်အလက်များနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုအချိုးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြု ထားသည်။4IMF တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP (PPP) ကို အသုံးပြုထားသည်။
18.6ထိုကာလအတွင်း ယင်း၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ဒေါ်လာ (၃,၆၀၀)မှ ဒေါ်လာ (၆,၈၀၀) (PPP) အထိ ၂-ဆ နီးပါး မြှင့်တက်နိုင်ခဲ့သည်။ အလားတူစွာပင် ထိုင်းနိုင်ငံကလည်း ယင်း၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အကြား နှစ်စဉ် (၆.၅-ရာခိုင်နှုန်း)တိုးမြှင့်ကာ ဒေါ်လာ (၄,၈၀၀)မှသည် ဒေါ်လာ (၁၀,၈၀၀)အထိ မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သည်။5 2.77.01.08.0နှစ်စဉ်ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (ဂျီဒီပီ) ၈ % တိုးတက်စေရန် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုနှစ်ဆမကတိုးမြှင့်ရန်လိုသည်။ ။ါပ်ငိုန်ပျုခမ်းဥျကအိုကျးာမ်းနဏဂ်းနိက့်ငာကြောသေားထုံခြ်းမွှလ။်ကျခ်တှမ (၁) ၂၀၁၀-ါပှိရ်စှနုခ၀ျးာမ့်ငဆအ်းနှုန်ငိုကအ်ပုလအ့်ငှနှုမ်ကွရ်ငာဆ်ေင (၂) ၁၉၉၀ှမ်စှနုခ၂၀၁၀ွံဖုစားအ်းမွစ်တုထ်နုကိထအ်စှနုခွံ့ဖ်ငျှလုပြုးံသအိုကှုမိးုဖြ့်ညသှုမိးုဖြ (၂.၅%) ။်ညမနျေက့ျာလေ်ဥစအ်ကထ ~2x်တုထ်နုက်ငတ်နျိခံစှုမ်ကတိးုတုစားအ်းမွစ ၂၀၀၅-၁၀၂ုစားအ်ငအားသ်ပုလာသ်ေပအိုလှမွံဖှု့မိးုဖြ၂၀၁၀-၃၀ားအ်ပုလာသေားထ့်ငှမြိးုတွံဖ်းနှမ်ျှာမှေမုစားအ်းငွသ့ိးုဖမြှု ၂၀၁၀-၃၀ GDPွံဖှု့မိးုဖ်ြကျခ်းနှမ်ညရ ၂၁၀-၃၀ နှစ်စဉ် GDP ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းအမှန် % လိုအပ်သောဖြည့်စွက် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု ဖွံ့ဖြိုးမွှဲုဖအွငေုံပ်နရးကြွေငောကတံင်ငိုန။်စမအြ်းငရအ်းငတသွံ့ဖှရာအ့်ကျခ်ပသုးံသးရေွးာပီးစ့ာမ်နမြ၏းဌ်ေနိစ်ဏဘးရေိးုဖြ၂၀၀၅- ၀၆။နာဌ်းငအ်းငရာစိုဟဗံင်ငိုနာမ်နမြ။ွငေုံပ်နရ့ာမ်နမြ။်စှနုခ ပြကွက် E2ားအ်းမွစ်တုထ်နုကဲဘှိရမှုမ်ကတိးုတ GDPွံဖှု့မိးုဖြ (၃.၇%) မက်ကင်ဆီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ဆန်းစစ်ချက်ကဏ္ဍခုနစ်ရပ်က၂၀၃၀ပြည့်နှစ်တွင်စီးပွားရေးထုတ်လုပ်မှုကိုဒေါ်လာသန်းထောင်ပေါင်း၂၀၀အထိတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ။်စမအြ်းငရအ်းငတသပြကွက်E3 50.40.10.20.68.010.521.29.8်းငါပေုစုစးရ်ေယွသ်ကဆျးာမ်းနင်ပုလးကြွေငေ်းနင်ပုလွးာသီးရခ ငအ်းမွစ်/သတ္ထီုအ်ကာဆအေံခခအြေးရေျးိုပ်ကိုစှုမ်ပုလ်တုထ်နုက 49.148.86.411.114.121.769.4220.6 ၂၀၁၀ နှစ်ထပ်တိုးနှစ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း ၂၀၁၀-၃၀ % 1048517 23 23 8 ကဏ္ဍအလိုက်အမှန် GDP ပမာဏတွက်ချက်ခြင်း ၂၀၁၀-ခုနှစ်ဈေးနှုန်းများဖြင့်ဒေါ်လာသန်းထောင်ပေါင်း ၂၀၃၀ ကါပိုဆအဏ္ဍ၇-ှမ်ပရ GDP်နခှုမ်းညဆ့်ညဖြ့၏ရိးုစအ်ညသ်ကျခ်းနှမ၂၀၁၀-်စှန့်ညပြ GDPိုတ်ပ်ုနျွကူမ်းငာကအြေ။်ညသားခြွာက့်ငှနျးာမ်ကလအ်ကျခအှုမ်းညဆ့်ညဖြ့ကကဏ္ဍိုသ်ါပအှေမခြေ်ကာအေားအ်းငျခုခ်စတ့ာမပဥ။်ညသ်စဖြ့်ငာကြေ်းငခ်ြစစ်းနဆ - ။်းငခ်ြကှာမြေ့်ငဖြိးုဖ်နတ်ကွကျးစေိုကျာမ်ကလအ်ကျခအှုမ်ပုလ်တုထ်နုက မက်ကင်ဆီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ဆန်းစစ်ချက်5IMF မှ တစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP (PPP) ကို အသုံးပြုထားပြီး IHS Global Insight မှ အလုပ်အကိုင် အရေအတွက်များကို အသုံးပြုထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ အချက်အလက်များသည် ၁၉၉၄ မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ အချက်အလက်များမှာ ၁၉၈၂ မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ ဖြစ်သည်။
19. မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချိန်ကောင်း - တစ်မူထူးသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ7ဆွေးနွေးမှု အမြောက်အမြားပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စွမ်းအင်နှင့်သတ္ထုကဏ္ဍတို့၏ အလား အလာကောင်းများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းနေချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အတား အဆီးမဲ့သောဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးတော့မည်ဆိုပါက စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုပေါ်တွင်သာ အမြင်ကျဉ်းစွာ မှီခိုအားထားမနေနိုင်ပေ။ ပို၍အမျိုးအစား စုံလင်ကွဲပြား သော စီးပွားရေးကို လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်စီးပွားရေး၏ အဓိကကဏ္ဍများ၏ အလား အလာများကို အပြည့်အ၀ထုတ်ယူ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် GDPကို ၂၀၃၀-ပြည့် နှစ်တွင် ဒေါ်လာဘီလီယံ (၂၀၀)ကျော် မြှင့်တင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ (ပြကွက် E-3)။သို့ဖြင့် ၂၀၃၀-ပြည့်တလျှောက် အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၁၀-သန်းကျော်ကို ဖန်တီးပေးနိုင် ပေလိမ့်မည်။ စုစုပေါင်းစီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း၏ (၈၅%) နီးပါးကို အတူတကွ ပေါ်ပေါက်စေသော စိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး၊ စွမ်းအင်နှင့် သတ္ထုတူးဖော်ရေးနှင့် အခြား အဆောက်အဦကဏ္ဍတို့သည် ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ ဦးဆောင်ကဏ္ဍများဖြစ်သည်ဟု ဆန်းစစ်ချက်က အကြံပြုသည်။ n စိုက်ပျိုးရေး။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်း အကျယ်အ၀န်းတွင်အဆင့်(၃၈) ရှိသည့်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း ထာဝရသီးနှံများ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သော မြေအကျယ်အ၀န်း အဆင့်တွင် ကမ္ဘာ့အဆင့် (၂၅)ရှိကာ ထိုမြေဧရိယာ ဟက်တာ (၁၂.၂၅)သန်းခန့် ပိုင်ဆိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် စိုက်ပျိုးမြေများ အလျှံပယ် ကြွယ်ဝသော်လည်းမြန်မာ့စိုက် ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ ထုတ်လုပ်မှုသည် နိမ့်ကျဆဲဖြစ်သည်။ မြန်မာ့လယ်ယာလုပ်သားတစ်ဦး၏ တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးသည် ဒေါ်လာ (၁,၃၀၀)သာရှိပြီး ထိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှားတို့တွင် ဒေါ်လာ (၂,၅၀၀)ခန့် ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ ထုတ်လုပ်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့် မျိုးစေ့များ၊ ဓါတ်မြေသြဇာများ၊ ရေနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ သွင်းအားစုပမာဏနည်းပါးနေခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တိုး၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သေးကြောင်းကို ဖော်ပြနေသည်။ သစ်သီးဝလံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကော်ဖီ၊ စားအုန်းဆီနှင့် ရာဘာကဲ့သို့သော တန်ဖိုးမြင့် သီးနှံများအပြင် ငါး၊ ပုဇွန်ထုတ်လုပ်ရေးတို့၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်တက်လာစေမည့် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော အလားအလာများလည်း ရှိနေသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၏ (၅၂%)ကို လက်ရှိ ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိရာ စိုက်ပျိုးရေး၏ အပြည့်အ၀ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာကို ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းသည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သေချာစေရေးအတွက် အဓိကကျပေသည်။ n စွမ်းအင်နှင့် သတ္ထုတူးဖော်ခြင်း ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရေးကြီးသောပို့ကုန်များ ဖြစ်သည့် ရေနံနှင့် ဓါတ်ငွေ့သိုက်များအပြင် ပတ္တမြား၊ နီလာနှင့် ကျောက်စိမ်းကဲ့သို့သော အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ ပဒေသာပင်များလည်း ရှိသည်။ ဥပမာ - မြန်မာနိုင်ငံသည် တွေ့ရှိပြီး ဓါတ်ငွေ့သိုက်များ၏ ပမာဏအရ လက်ရှိအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် (၄၆)တွင်ရှိနေပြီး ရှာဖွေခြင်း မပြုရသေးသော ဓါတ်ငွေ့သိုက်များ၏ ပမာဏမှာ ပို၍ပင် များပြားနိုင်သော အလားအလာရှိနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျောက်စိမ်းသည် အာရှတွင် တန်ဖိုးမြင့်မားပြီး ကမ္ဘာ့ကျောက်စိမ်းထုတ်လုပ်မှု (၉၀%)ကို မြန်မာနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အဆိုပါ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များအနက် အများစုမှာ ကျယ်ပြန့်စွာဖော်ထုတ်ခြင်း မပြုရ သေးပါ။ မျက်မှောက် ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် ဖော်ထုတ်ပါက တွေ့ရှိမည့် အလား အလာသည် လက်ရှိခန့်မှန်းချက်များထက် အလွန့်အလွန်များပြားနိုင်သည်။ n ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ။ ယနေ့ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်အားခကုန်ကျ စရိတ်သည်သက်သာလျက်ရှိပြီး အထည်အလိပ်၊ အ၀တ်အစား၊သားရေထည်၊ ပရိဘောဂနှင့် ကစားစရာကဲ့သို့ အလုပ်သမားအများစု အသုံးပြုသည့် ကုန်ထုတ်ရေးကဏ္ဍတွင် ထုတ်လုပ်
အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂ဝ၁၃)
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (၂ဝ၁၃)